Ihe niile banyere egwuregwu vidiyo nke oge a, Pokémon GO | Gam akporosis
Ihe niile gbasara Pokémon GO, egwuregwu vidio nke na-eme ka ụwa nile mebie
Anyị nwere Bọchị 9 nke ezigbo ara maka ihe zuru ụwa ọnụ nke bịakwasịrị anyị na-atụghị anya ya, yabụ anyị ka na-anwa ịgbake ma daba na eziokwu ahụ dị elu, ịchụ nta maka Pokémons, na Nintendo nke na-eduzi ntụrụndụ nke nde mmadụ ma ọ bụ ihe ga-abịa mgbe vidiyo ahụ a na-ahapụ egwuregwu taa na ụwa. Yabụ ka anyị na-eche ebili ọzọ iji dọta anyị n'akụkụ osimiri iji gbalịa ịlaghachi n'ụkwụ anyị na akụkọ ndị ahụ dị egwu, mmelite na akụkọ ndị ọzọ ga-abịa, nchịkọta nke ihe mere na usoro ndị a bụ ihe kachasị mma anyị nwere ike ime tupu ya na-abịa izu ụka
Pokémon GO mebisịrị Androidsis yana onye ọrụ ibe m Francisco na onye edemede, anyị ejirila ọtụtụ akụkọ. Enweghị ike ide ha niile, yabụ anyị anwalela gosipụta ihe kachasị mkpa N'otu aka ahụ, e meela ọtụtụ vidiyo iji gosipụta ihe mbụ mmadụ ga-eme mgbe ọ na-eji n'okporo ámá na ekwentị ha n'aka ịchụ nta Pokémon ma bụrụ onye ọzụzụ kachasị mma na mbara ala, ọbụlagodi na enwere nde mmadụ dị ka anyị. Tupu mbufịt tsunami nke ahụ n'onwe ya bụ Pokémon GO, ntinye ndị a na-anakọta akụkọ niile mere na ụbọchị itoolu a nke anyị bụ ndị akaebe etu eziokwu siri gbadata wee dịrị.
1 Ndụmọdụ na usoro maka Pokémon GO
2 Pokémon GO na akụkọ banyere ya
3 Ọchịchọ gị, eziokwu pụrụ iche na ndị ọzọ
Ndụmọdụ na usoro maka Pokémon GO
Na egwuregwu vidio ebe GPS, ihuenyo na-arụ ọrụ na igwefoto ejiri, ị nwere mere ka batrị nke ekwentị anyị nwụrụ n'okporo ụzọ ka anyị fọrọ nke nta ka anyị gbaa ọsọ ịchụ nta na Pokémon nke pụtara n'akụkụ nkuku. Anyị gbalịrị ịhapụ ndị nduzi egwuregwu kachasị dabara maka ụbọchị 9 ndị mbụ a, yabụ enwere m olileanya na ha ga-anọgide na-ejere gị ozi nke ọma. Nwee vidiyo ọbụla maka ịchụ nta.
Ndụmọdụ abụọ iji melite ndụ batrị mgbe ị na-egwu Pokémon GO
Ntuziaka obere egwuregwu iji bụrụ onye nkuzi na Pokémon GO
Pokemon Go, anyị na-egosi gị otu esi etinye ya ma anyị ga-achụ nta maka Pokemons mbụ anyị
Pokémon GO na akụkọ banyere ya
Osimiri ink na-agba ọsọ ụbọchị ndị a maka nke ahụ ụfọdụ ozi hapụrụ azụ na-atọ ụtọ. Dịka m kwuworo na mbụ, ọ dịghị mfe nza nke ndị kacha amasị, ọ bụghịkwa atụmatụ na anyị na-eji akụkọ 4 ma ọ bụ 5 achọ onwe anyị mma kwa ụbọchị. Yabụ n'akụkụ a anyị gbalịrị ịghara ịhapụ ihe ọ bụla dị mkpa.
[APK] Download Pokémon Gaa ugbu a ma kwadebe ịchụ nta na ịlụ ọgụ maka agbata obi gị
Pokemon Go na-enwe nsogbu, sava Nintendo dị ala
Pokémon GO dị njikere iru Twitter na ndị ọrụ na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na gam akporo
[APK] Pokemon Go melite na ndozi arụmọrụ na nkwado maka gam akporo N
Nintendo mbak abawanyewo uru site na 86% na ụbọchị 8
Ọchịchọ gị, eziokwu pụrụ iche na ndị ọzọ
N'agbanyeghị nke ahụ ọtụtụ puku akụkọ ka ga-akọ na mmekọrita Pokémon GO, na enwere ọtụtụ ndị si United States abịa. Enwere m ike ịkwado gị na izu ole na ole sochirinụ, anyị ga-enwe otu ihe na-eme na mba anyị, na-enwe site na taa nbudata ukara site na Playlọ Ahịa Google.
Etu esi ewepu ederede niile na Pokémon site na ndọtị a maka Chrome
5 batrị ndị ọzọ na-ana gị ama ama mgbe ị na-egwu Pokémon GO
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Ihe niile gbasara Pokémon GO, egwuregwu vidio nke na-eme ka ụwa nile mebie
Ọ bụ egwuregwu kachasị egwuri egwu n'akụkọ ihe mere eme, okwu a na-achọkarị na Google, ọ karịrị ihe niile ... mana ọ naghị akpọ m. Eziokwu bụ na m na-ahọrọ Clash Royale, na-eche na ọ dịkwa ọhụrụ.
Maka m, ihe kachasị mma bụ na ọ na-akpọrọ ndị mmadụ n'okporo ámá nakwa na ọ na-emepe ụzọ ọhụrụ maka eziokwu gbakwunyere ... yabụ anyị ga-ahụ ebe nzọ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-aga.
O doro anya na nke ahụ bụ nke kachasị dị mma. Ebumnuche ịpụ n'ụlọ na ntakịrị mmekọrịta mmekọrịta dị oke mma, m na-ekwu ya dịka onye na-arụ ọrụ na andntanetị ma na-etinye ọtụtụ awa na PC hehe.
Echiche m bụ maka egwuregwu nke m na-aghọtaghị n'ihi na ọ na-ewepụta ihe ọ na-ewepụta, hehe. I nwere ihe nile kpatara ya.